အသားဖြူဆေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ | Colors Rainbow
August 17, 2017 June 28, 2018 Admin Admin 2729 Views0Comments ဝိုင်	min read
လူတွေ တော်တော်များများဟာ အသားဖြူချင်ကြတာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အများစုကတော့ အသားဖြူရင်လှတယ်လို့ ထင်မြင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုထင်မြင်စေတဲ့ အချက်တွေမှာ မီဒီယာတွေဟာလည်း အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုမှာ ရှိပါတယ်။ လူတွေ ထိတွေ့နေတဲ့ မီဒီယာတွေက အသားဖြူတာကို အလှတစ်ခုအဖြစ် ပုံဖော်ပြတာ များတဲ့အတွက် လူတွေဟာလည်း အသားဖြူချင်လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုသိတဲ့ အလှထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံတွေက အသားဖြူစေတဲ့ အလှအပထုတ်ကုန်များကို စျေးကွက်ထဲ တင်သွင်းလာပါတော့တယ်။
လူတွေ သုံးစွဲနေတဲ့ အသားဖြူဆေးတွေဟာ ဘေးကင်းတယ်၊ မကင်းဘူးဆိုတာကို လူတွေက သိပ်မတွေးပဲ အသားဖြူချင်တာ၊ လှချင်တာနဲ့ပဲ ဝယ်ယူသုံးစွဲနေကြပါတယ်။ စျေးကွက်ထဲကို သောက်ဆေးပုံစံတွေနဲ့ တံဆိပ်မျိုးစုံ ဝင်နေတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ အသားဖြူစေတယ်ဆိုတဲ့ သောက်ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ယေဘုယျ ပြောရရင်တော့
တစ်ချို့အသုံးပြုသူတွေဟာ သောက်သုံးပြီး မကြာခင်မှာပဲ အရေအပြားမှာ အကွက်တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ချက်ချင်းပဲ အသုံးပြုတာကို ရပ်သင့်ပါတယ်။ မိမိသုံးစွဲနေတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ကို ဆရာဝန်ကိုပြပြီး သေသေချာချာ ဆွေးနွေးကုသသင့်ပါတယ်။
၂။ ကင်ဆာဖြစ်စေသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ
အသားဖြူဆေးအများစုမှာ ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hydroquinone ဟာ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ Hydroquinone ပါဝင်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို တားဆီးပိတ်ပင်ပါတယ်။
၃။ ပုံမှန်အသားအရေ လုပ်ဆောင်မှုများကို ပျက်ပြားစေခြင်း
အသားဖြူဆေး အများစုမှာပါဝင်တဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေဟာ လူတွေရဲ့ အရေအပြားမှာရှိတဲ့ Melanin ထုတ်လုပ်မှုကို အနှှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ တစ်ချို့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေက ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေပါတယ်။
၄။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုများဖြစ်စေခြင်း
ညအိပ်မပျော်ခြင်း၊ မူးဝေအော့အန်ခြင်း၊ အစာမကြေဖြစ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အသားဖြူဆေးတွေကို ဘယ်တံဆိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရေရှည် ပုံမှန်သောက်သုံးနေတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အသည်းက အလုပ်လုပ်ရတာတွေများပြီး အသည်းပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
အသားဖြူဆေးတွေက လုံးဝမကောင်းဘူးလားလို့ မေးရင်တော့ ကျွန်တော် ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာမှုတွေအရ ဖြေရရင် တချို့ဆေးတွေကို မှန်ကန်တဲ့ အတိုင်းအဆနဲ့ သောက်သုံးရင်တော့ ထိရောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာလည်း အထူးတတ်ကျွမ်း နားလည်တဲ့ သမားတော်တွေနဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြိးမှ ထိရောက်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အသားဖြူဆေး (သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေး၊ လိမ်းဆေး) တွေမှာ အဓိကပါဝင်တာကတော့ Glutathione ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အသည်းမှာ သိုလှောင်ထားတဲ့ amino acid တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Gluthathione ကို ကျန်းမားစေတဲ့ ဓါတ်စာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးကြောထဲမှာ Glutathione ကို အချိန်ကြာမြင့်အောင် ထိန်းထားပေးနိုင်တဲ့ အသီးအနှံတွေကတော့ သစ်ကြားသီး၊ ထောပတ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ လိမ္မော်သီးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသီးအနှံတွေဟာ အသားမဖြူပေမယ့် အရေပြား ကျန်းမာလှပမှုအတွက် ကူညီတဲ့အသီးအနှံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသားဖြူဆေး (Glutathione) ဟာ များသောအားဖြင့် သောက်ဆေးအနေနဲ့ လာပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေကြားမှာ ရေပန်းစားလှတဲ့ ဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှက နိုင်ငံအတော်များများမှာလည်း လူကြိုက်များ သုံးစွဲလာတဲ့ ဆေးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ ထိုးဆေးပုံစံနဲ့လည်း စျေးကွက်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ အရေပြား အထူးကုဆရာဝန်တွေ၊ အလှအပေတွေအတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ clinic က ကျွမ်းကျင်သူတွေက ထိုးဆေးပေးခြင်းက ပိုထိရောက်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဆေးကို ပုံမှန်ထိုးနိုင်ဖို့ဆိုတာတော့ စျေးနှုန်း အရမ်းမြင့်မားလှပါတယ်။
Glutathione ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Free radical နဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့အတွက် အရေအပြားပေါ်က အမည်းစက်တွေနဲ့ နေလောင်ဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အစက်အပျောက်တွေကို သက်သာစေပါတယ်။
အရေပြား အတွင်းလွှာကို Dermis လို့ ခေါ်ပြီး ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့ မြင်ရတဲ့ အပေါ်ယံလွှာကိုတော့ epidermis လို့ ခေါ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အရေအပြားကို အဆုံးအဖြတ်ပေးတာကတော့ melanin နဲ့ သူ့ကို synthesis လုပ်ပေးတဲ့ melanocyte ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Glutathione သောက်သုံးသူတွေမှာ အရေအပြားမှာ အကွက်ပေါ်ခြင်းနဲ့ ခေတ္တယားယံမှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သောက်ဆေးအဖြစ် ပြုလုပ်ရာမှာ နွားနို့ကနေ ထုတ်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက် နွားနို့နဲ့ ဓါတ်မတည့်သူတွေက ပိုပြီး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အသားအရောင်အလိုက် အသားဖြူဆေး အာနိသင် (သောက်ဆေး)
အသားအရောင် ဆေးသုံးစွဲသင့်သော ကာလအတိုင်းအတာ
ညိုသော အသားအရောင် ၁လမှ ၃လ
အညိုရင့်ရင့် အသားအရောင် ၃လမှ ၆လ
အမဲရောင် ၆ လမှ ၁၂ လ
အမဲရင့်ရင့် အသားအရောင် ၂ နှစ်မှ ၂ နှစ်အထက်
Glutathione Capsule တွေကို 20 -40/Kg(Body Weight) နဲ့ တစ်နေ့ကို နှစ်ကြိမ်လို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုကြပေမယ့် စျေးကွက်ထဲက Capsule တွေက 1000mg နဲ့ ၀င်တာတွေ ရှိနေပါတယ်။
အသားဖြူခြင်းကတော့ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မတူနိုင်ပါဘူး။ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ဇီဝဖြိုခွင်းမှု၊ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်၊ အရေပြားအရောင်တို့ဟာ မတူညီကြလို့ပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ဆေးကို ခန္ဓာကိုယ်က စုပ်ယူမှုနဲ့ ဗီတာမင်တွေ ပေါင်းစပ်ပုံခြင်းတွေ မတူညီမှုအပေါ်လိုက်ပြီးလည်း ကွာပါသေးတယ်။
Glutathione ဟာ ဝက်ခြံတွေကို သက်သာစေပေမယ့် ဟော်မုန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဝက်ခြံတွေကိုတော့ မသက်သာစေပါဘူး။
ကိုယ်ခံအားကို တက်စေပါတယ်။ (ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့ ရောဂါပိုးတွေကို ခုခံနိုင်ပြီး ပုံမှန်ကိုယ်ခံအားကို ထိန်းပေးပါတယ်။)
ပုံမှန်ဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့ကျ (သို့မဟုတ်) ရပ်ဆိုင်းစေပါတယ်။
ဆဲလ်ပြင်မမှာရှိတဲ့ Glutathione တွေဟာ enzyme တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ GGT – gamma glutamyl transferase ရဲ့ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် glutamate တစ်နည်းအားဖြင့် exittotoxin တစ်မျိုးကို ထွက်စေပါတယ်။ အာရုံကြောနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ပြသာနာတွေကို ဖြစ်စေပါ တယ်။ ဥပမာ – ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခဲခြင်း။
“Glutathione, The ultimate of Antioxidant” စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သူ Dr Alan Pressman က Glutathione သောက်ဆေးသုံးစွဲသူတွေဟာ ဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ H pylori အကောင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အနာ ( ulcer) ရှိသူတွေဆိုရင် မသုံးစွဲသင့်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အနာကြောင့် ယောင်ယမ်းနေတဲ့ နေရာတွေမှာ marcrophages နဲ့ neutrophils တွေရှိပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားတွေဟာ ဒါတွေကို စားသုံးပြီး အသက်ရှင်ပါတယ်။ Glutathione သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် marcrophages နဲ့ neutrophils တွေကို တိုးပွားစေတာမို့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ပိုအသက်ရှင်စေတယ်လို့ ယူဆရတဲ့အတွက် တားမြစ်ထားပါတယ်။
Glutathione သောက်ဆေးနဲ့ လိမ်းဆေးတွေဟာ အရေပြားမှာရှိတဲ့ Melanin ဖြိုခွင်းမှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေပါတယ်။ Melanin ဟာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV radiation) ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Glutathione ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့ နို့တိုက်နေတဲ့ မိခင်တွေအတွက် မသင့်လျော်ပါဘူး။ အရွယ်ငယ်လွန်းတဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်း မသင့်တော်ပါဘူး။ မသုံးစွဲခင် ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
၁၉၉၇ သြဂုတ်မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine မှာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေ ပေးရတဲ့ Glutathione ဟာလေပြွန် ကို ကျဉ်းပြီး တင်းကျပ်စေတယ်လို့ ထောက်ပြထားပါတယ်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာ sulfite ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး အသက်ရှူကျပ်စေပါတယ်။ ရင်ကြပ် (Asthma) ရောဂါရှိသူများ အတွက် မသင့်လျော်ပါဘူး။
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းမှာတော့ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ လေပွခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
“ဆရာ ဆရာ့လူနာက ဆရာ့ကို သိပ်ကျေးဇူးတင်နေတယ်။ ဆရာ ပေးလိုက်တဲ့ဆေးကြောင့် အသားတွေ အသားတွေ ဖြူလာတယ်တဲ့”
အလှကုန် စျေးကွက်ထဲကို အလှအပနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဝင်ရောက်နေတဲ့အခါ လူတွေ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့အထိ လက်လှမ်းမှီနေပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာလည်း အသားဖြူဆေးတွေဟာ စျေးကွက်ထဲမှာတင်မက အွန်လိုင်းရောင်းဝယ်မှုတွေမှာပါ ရေပန်းစားနေပါတယ်။ ကြော်ငြာအားတွေ ကောင်းသလောက် ဝယ်ယူသုံးစွဲချင်တဲ့သူတွေလည်း များပါတယ်။ အလှအပလို့ဆိုလိုက်ရင် မိန်းကလေးတွေနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်တော့ဘဲ ယေကျ်ားလေးတွေပါ အလှအပကို ဂရုပြုလာကြပါတယ်။ အသားဖြူဆေးတွေ အွန်လိုင်းပေါ် နာမည်ကြီး နေချိန်တုန်းက လူနာတစ်ယောက် ကျွန်တော့ဆေးခန်းကို လာဖူးပါတယ်။ ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပြီး နာလန်ထစအချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ကိုပေးတဲ့ ဆေးထဲမှာ Vitacap ဆိုတဲ့ အားဆေး ပါပါတယ်။ တစ်ပတ်လောက်ကြာပြီးနောက်မှာ လူနာရဲ့အမေဖြစ်သူနဲ့ စျေးမှာတွေ့တော့ ကျွန်တော့ကို ပြုံးရွှင်စွာနဲ့ နှုတ်ဆက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် တွေဝေသွားပါတယ်။ ကျွန်တော် ပေးလိုက်တဲ့ဆေးထဲမှာ အသားဖြူဆေး မပါပါဘူး။ အကြောင်းရင်းကို သေချာမေးကြည့်တော့ လူနာဖြစ်သူက ကျွန်တော့်ဆေးခန်း မလာခင်ကတည်းက အွန်လိုင်းမှာ ကြော်ငြာတဲ့ အသားဖြူဆေးကို စသောက်နေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ကောင်မလေးက အသားဖြူလာမှ လက်ထပ်မယ်ဆိုလို့ အသားဖြူဆေးကို အွန်လိုင်းကနေမှာပြီး သောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော့်ဆေးကို စသောက်ချိန်မှာ ပိုသိသာလာတယ်ဆိုပြီး Vitacap ကိုအသားဖြူဆေးထင်ပြီး စွဲစွဲသောက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အသားဖြူချင်ဇောနဲ့ High dose တွေ သောက်မှာစိုးလို့ တော်တော်လေး သေချာရှင်းပြလိုက်ရပါတယ်။
အဲဒီအဖြစ်အပျက် ကြုံပြီးနောက်ပိုင်း Glutathione နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို ရေးရင် ကောင်းမယ်ဆိုပြီး ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
– Effects of oral glutathione supplementation on systemic oxidative stress biomarkers in human volunteers. Allen J, Bradeley RD.Journal of Alternative and Complementary Medicine, September 2011
– Skin-whitening and skin-condition-improving effects to topical oxidized glutathione:adouble-blind and placebo-controlled clinical trial in healthy women. Watanabe F, Hashizume E. Clin Cosmet Investig Dermatol.2014 Oct
← ကိုယ့်ကိုယ်ကို လက်ခံနိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်
လိင်တူနှစ်ခြိုက်မှုဆိုင်ရာပညာရပ်အဘိဓာန် အပိုင်း (၂) →
တစ်နေ့ နှစ်ခွက်သောက် ဗိုက်ကအဆီတွေပျောက်
February 13, 2018 Admin Admin 0
ထမင်းလုံးတစ္ဆေ (Hypnic Jerk)
March 22, 2016 Admin Admin 0
အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ် (Ebola Virus) အကြောင်း သိစရာ
အရေပြားနုပျိုမှုကို ပျက်ယွင်းစေမယ့် အစားအသောက်များ